Fitsangatsangana an-tadio mankany Bangkok noho ny vola kely noho ny noeritreretinao | Vaovao momba ny dia
Nomena anarana sy fantatra amin'ny anarana hoe "tanànan'ny anjely ', Bangkok no renivohitr'i Thailand. Miaraka amin'ny fitaomana lehibe na eo amin'ny tontolon'ny zavakanto na eo amin'ny fiaraha-monina na ara-politika, izy io koa dia iray amin'ireo toeran-kaleha ankafizin'ny ankamaroan'ny mpizahatany. Izany no antony anio, afaka manome ny tenanao ny fitsaboana tsara mendrika anao ianao.
Nahita a dia lavitra noho ny roa andro mahery, amin'ny vidiny mahavariana. Marina fa angamba tsy fotoana ela ny midera ny zava-drehetra nomanin'i Bangkok ho antsika, fa tsy afaka manadino tolotra toa izao koa isika. Raha te hahafantatra izay lazainay ianao dia mamakia hatrany.
1 Sidina amin'ny budget ho any Bangkok
2 Hotely mora vidy any Bangkok
3 Inona no ho hita any Bangkok
3.2 Tempolin'i Wat Pho
3.3 Tempolin'i Wat Arun
3.4 Dia an-tongotra manamorona ny Ony Phraya
3.5 Ankafizo ny sakafo any amin'ny fivarotana amoron-dalana
Sidina amin'ny budget ho any Bangkok
Satria toeran-kafa notsidihina izy io, dia tsy dia mora vidy ny dia mankany amin'io faritra io. Ho fanampin'izay, tsy maintsy ampidirintsika ny ora fiaramanidina izay ananantsika avy amin'ny firenentsika. Eny, dia lavitra io fa mendrika izany tokoa. Izany no antony tsy ahafahan'ny fanahy mpihaza rehetra mandà izay lazaintsika azy ireo.
Mila miari-tory tsy ho ela ianao, fa araka ny lazainay, ny vidiny dia mahatonga ny torimaso hanjavona. Hivoaka isika avy any Madrid ka hatrany Bangkok amin'ny 2:55 maraina. Tokony holazaina fa manana fijanonana ny zotra, noho izany dia miresaka sidina 25 ora isika. Ka andro hafa noho ny fiaingana ny fahatongavana. Mazava ho azy, amin'ity tranga ity dia tafiditra ao ireo entana. Ny fiverenana dia hatao roa andro aorian'ny maraina. Izany rehetra izany dia amin'ny vidiny 371 euro. Inona koa no mbola angatahintsika? Raha liana ianao dia azonao atao ny mamandrika azy haingana Minitra farany.
Hotely mora vidy any Bangkok
Raha ny sidina dia tsy ho tavela koa ny trano fandraisam-bahiny. Izany no antony nisafidianantsika iray ihany koa izay hanana ny vidiny mora kokoa. Ilay hotely resahina dia ny 'Hotel Majestic Suites'. Any amin'ny Sukhumvit Street no misy azy, 10 minitra miala eo amin'ny gara Nana BTS. Mazava ho azy, manodidina ny 20 kilometatra miala ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi izy io. Saingy araka ny filazantsika azy, dia mipetraka tsara izy io noho ny fizaran-taona.
Ary koa, mety any amin'ny faritra fialamboly tsara io. Ny clubclub ary koa ny fivarotana no ho lehibe amin'ity toerana ity. Rivo-piainana tsara hahagaga anao. ny hevitra momba ny sandam-bola Tsara ihany koa izy ireo, ka toerana tena ilaina ho antsika izy ireo. Afaka mandany telo alina amin'ity trano fandraisam-bahiny ity ianao amin'ny 115 euro fotsiny. Raha hitanao fa manintona toy ny zavatra rehetra atolotray azy dia azonao atao ny manao famandrihana eDreams.
Inona no ho hita any Bangkok
Iray amin'ireo fijanonana mihoatra ny faneriterena, tsy mitondra any amin'ny Royal Palace. Raha lazaina amin'ny ankapobeny dia azontsika atao ny milaza fa fitambaran'ny tempoly izy io ary koa vala. Ao anatin'izy ireo dia mila mankafy ny fahalehibiazan'ny 'Tempolin'ny Buddha Emeraoda'. Na dia mitondra an'io anarana io aza izy dia trano fiangonana fotsiny fa tsy tempoly.
Tempolin'i Wat Pho
Izy io dia iray amin'ireo tempoly lehibe indrindra ary hita ihany koa izay misy ny Royal Palace. ny sarivongana buddha Mitranga ao izy ireo ary voalaza fa afaka mahita mihoatra ny 1000. Iray amin'ireo manintona ny saintsika foana ny momba ilay Buddha mipetraka eo amin'ny 43 metatra ny halavany.
Tempolin'i Wat Arun
Amin'ny lafiny ilan'ny ony, na dia eo alohan'ny Royal Palace aza, ho hitantsika io tempoly hafa io. Ny marina dia tsy azo idirana ao anatiny izy io, fa ny fitsidihana azy avy any ivelany dia efa hevitra iray hafa tsara indrindra ananantsika handrakofana ireo dia roa andro nitetezantsika.
Dia an-tongotra manamorona ny Ony Phraya
Ity renirano ity no miandraikitra ny fiampitana an'i Bangkok. Ka, rehefa avy nahita tempoly vitsivitsy ary nankafy ny rivotra iainan'ny faritra, tsy nisy toa ny fitsaharana tamin'ny fitsidihana ny Renirano Phraya. Misy sambo mandroso sy miverina izay matetika miala isaky ny 10 minitra. Ka tsy sarotra ny mahazo iray. Tokony ho fantatrao fa isaky ny vidiny dia mitentina eo amin'ny 6 baht ianao fa ny fanovana dia santimetatra vitsivitsy monja.
Ankafizo ny sakafo any amin'ny fivarotana amoron-dalana
Fahafinaretana lehibe iray hafa koa ny fahazoana misakafo eny ivelany. Marina izany misakafo any Bangkok tsy lafo io. Satria misy trano fisakafoanana izay ambanin'ny 5 euro dia azonao atao ny mankafy lovia sy zava-pisotro mahafinaritra. Fa na izany aza, ny fivarotana amoron-dalana foana dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Tsarovy fa tena omena hanitra izy ireo raha sanatria tsy tianao be ilay izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Fitsangatsanganana tadio any Bangkok noho ny vola kely noho ny noeritreretinao
Ny Monasiteran'i Guadalupe